Home Wararka Guudlaawe oo diiday in kuraasta la xiro & Dabageed oo dagaal...
[Deg Deg] Guudlaawe oo diiday in kuraasta la xiro & Dabageed oo dagaal ku hanjabay
Waxaa magaalada Beledweyne caawa ka jira dhaqdhaqaaq ciidan iyadoo laga cabsi qabo in uu halkaa dagaal ku dhex maro ciidamo kala taabacsan Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyo ku xigeenkiisa Dabageed.
Sida MOL ay u sheegeen ilo wareedyo ku sugan magaalada Baladweyne, is afgarawaaga ayaa dhashay kaddib markii uu MW Guudlaawe uu diiday in kuraas loo xiro xubno uu lacag laaluush ka qaatay Dabageed iyo xubo ay wadato Villa Somalia.
Dhammaan murashaxiinta raadineysa xildhibaanada ee ku sugan magaalada Beledweyne ayaa raba in Doorashada aay noqoto mid loo wada tartamo qofna aanan loo xirin kursi, waxaana arrintaan aad ugu taageeray MW Guudlaawe Murashaxiinta badankood.
Waxaa magaalada ka jira caawa cabsi laga qabo dagaal ka dhaca Beledweyne
Wixii faahaahin ah dib ayaan idinkala socodsiin doonaa idimka alle.
Previous articleDowlada Kenya oo dalkeeda ka masaafurisay Xasan Kheyre. Waa maxay Sababta?
Next article[Akhriso] Hirshabelle oo soo hormarisay Doorashada 3 ka mida Kuraasta ku harsan Beledweyne
Macron “Waan fahamsanahay dareenka ay muujiyeen waana ixtiraamayaa Muslimiinta”
Madaxweyne Qoor Qoor oo maanta shir ku qabanaya Hobyo